शोभा शर्मा print
‘आमा मेरो न्वारनको नाम के हो?’ बहिनीको न्वारनको दिन मैले आमालाई सोधेकी थिएँ।
हामी पिँढीमा बसेर ढोकाबाट भित्र भइरहेको न्वारनको पूजा हेरिरहेका थियौं।
पण्डितले बहिनीको जुरेको नाम सुनाए। आमाबाबाले तुरून्तै उसलाई बोलाउने नाम अर्कै हो है भन्ने सूचना दि’हाल्नुभयो। म छक्क परेँ, ‘बोलाउने नाम अर्कै?’
मेरो मनमा एउटा प्रश्न फुत्त आयो, ‘त्यसो भए मेरो न्वारनको नाम के हो?’
जब आफ्नो नामको अर्थ खोज्न थाल्ने उमेर भयो मैले फेरि आमालाई त्यही प्रश्न सोधेकी थिएँ,‘आमा मेरो न्वारनको नाम के हो?’
यसपाली आमाले मलाई मेरो नामको कहानी सुनाउनु भयो, ‘तेरो बुवाले अर्कै नाम राख्ने भन्नुभएको थियो, हजुरबुवाले शोभा राख्नुपर्छ भन्नुभयो। यो सजिलो र राम्रो पनि छ।’
मैले बुवाले राख्न खोजेको मेरो नाम मनमनै दोहोर्‍याएँ, अल्ली लामो थियो। तै पनि त्यो नामको मलाई खुब माया लाग्यो।
त्यो बेला मलाई के थाहा, केही समय पछि मैले बुवाको थर समेत लेख्न पाउने छैन?
यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जब म मेरो जीवन र संसारका बारेमा प्रश्न गर्न थालेकी थिएँ। आफैँ सोच्ने, धारणा बनाउने र त्यसैमा अड्डी लिन सक्ने हुँदैथिएँ।
त्यसैबेला मैले सोध्न थालेकी थिएँ मेरो नामको अर्थ। आफू हुनुको अर्थहरु खोज्न सुरू गरेकी थिएँ कि?
अचानक त्यही बेला मेरो थर फेरियो। मेरो मन बेस्मारी विथोलियो, म बिथोलिएँ।
नाम बारे मेरा जति जिज्ञासा थिए, थरलाई लिएर मेरा मनमा प्रश्नहरू थिएनन्। त्यो मेरो पारिवारीक विरासत थियो। त्यसलाई मैले स्वभाविक मानेकी थिएँ। बुवाको थर मेरो पनि थर हो भन्नेमा मलाई किन्चित पनि शंकासम्म थिएन।
नौ पढ्दा हामीले आफ्नो नाम र थर के हो भनेर निर्णय गरिसक्नुपथ्र्यो। नौ कक्षामा जे लेखिएको छ, त्यो नाम नै एसएलसीमा लेखिन्थ्यो। र त्यो नामनै नागरिकतामा हुन्थ्यो।
नौ कक्षामा पुगुन्जेल मेरो थर मेरो बुबाकै थर थियो। आचार्य थियो। नौ कक्षामा एसएलसीका लागि ‘फारम’ भर्दा मेरो थर रातारात 'देवी शर्मा’ बनाइयो, मेरो सहमति बिना। मलाई कुनै जाानकारीनै नदिकन।
‘तपाईँले मेरो थर किन फेरिदिएको?,’ घर पुगेर म आमासँग झोक्किएँ।
कक्षामा आफ्नो नयाँ, थर सुनेर म निराश भएकी थिएँ, आमाको उत्तर सुनेपछि भाउन्न भयो।
स्कुलमा भर्ना लगायत सबै काम आमाबुवा नै गरिदिनुहुन्थ्यो। बुवा त्यो बेला पढ्नका लागि काठमाडौँ जानुभएको थियो। आमाले त मेरा बारे विचार गरिदिनुपथ्र्यो भन्ने मेरो गुनासो थियो।
आमाले होइन अर्का शिक्षकले पो थर फेरिदिनुभएको रहेछ।
सँगै बसेकी काकी तिर हेरेर आमाले ती शिक्षकले थर फेरिदिनुको कारण सुनाउनु भयो, ‘हेर न, छोरीको थर अहिलेनै 'शर्मा’ राख्यो भने विहे गरेर गएपछि पनि थर फेर्नु पर्दैन भन्दै सरले यसको थर फेरिदिनु भएछ, यसलाई चित्त बुझेन।’
चित्त नबुझेको मात्र होइन, मलाई यस्तो लाग्यो म मेरो परिवारबाट अलग भएँ। मेरो परिवारको पहिचानबाट मलाई कसैले सुटुक्क चुढेर छुट्याइदियो। रुखबाट बतासले चुँडाएको पात झैँ भँए म। निरुपाय भएर म कहिले आमाको अनुहार हेर्थेँ।
कहिले र्‍याखर्‍याख्ति पार्थे, ‘तपाँईहरू यही स्कुलमा शिक्षक भएको के काम?’
मेरो नयाँ थर स्कुलको अभिलेखबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएर दर्ज भैसकेको थियो, आमाले चाहेर पनि केहि गर्न सक्नु हुन्थेन।
काठमाडौंबाट बुबाआएपछि सबैका कुरा लगाउँनेछु भन्दै दिन गनेर बस्न म थालेँ। बुवा आए पनि मेरो थर फेरिने त थिएन, तर मेरो कुरा सुन्नुहुनेछ, चुकचुकाउनु हुनेछ। आमाले त त्यसलाई ठूलो कुरा मान्दै मान्नुभएको थिएन।
स्कुलमा जे सुकै लेखिएको होस्, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जे सुकै लेखिएको होस्, वा भोलि मार्कसिटमा जे सुकै लेखियोस्, मेले भने बुवाको थर लेख्न कहिलै छोडिनँ।
तर एकदिन यस्तो पनि आयो, बुवाको थरसँग मलाई मोहभङ्ग भयो। बुवाको थर लेख्न नपाउदा म धेरै वर्ष रन्थनिइसकेकी थिएँ। त्यसपछि म स्कुल सकेर कलेज पढ्न काठमाडौँ आँए। कलेजको छुट्टीमा घरगएका बेला बुवाले कापीमा बनाएको एउटा चार्ट देखेँ।
वंशावली रहेछ। हाम्रो पुस्तेनी हेर्दा खुबै रमाइलो लाग्यो। मैले त्यो हेर्दै गएँ। मेरा आँखा हाम्रो पुस्तामा गएर टक्क अडिए।
मलाई फेरि भाउन्न भयो।
त्यहाँ त भाइको मात्रै नाम छ। हामी दिदिबहिनीको नामै थिएन। अनि मैले फेरि नियालेर हेरेँ। त्यहाँ त आमाको पनि नाम थिएन। फुपुहरुको र हजुरआमाको पनि थिएन।
थाहा छैन कहिलेदेखि वंशावली लेख्न सुरु भयो। थाहा छैन वंशमा आमा र छोरीहरु किन अटाएनन्। थाहा छैन आमाको पहिचान किन आवश्यक ठानिएन।
म अचम्म पर्छु, यो धर्तीमा छोरीमान्छेको नाम, थर, अधिकार किन नअटाएको?
‘वंशावलीमा हाम्रो नाम खै?’ मैले बुवालाई सोधेँ।
शायद बुवाले यस्तो प्रश्न आउँछ भनेर सोच्नुभएको थिएन। उहाँलाई मेरो माया त भरपुर थियो, अहिले पनि छ, मेरो प्रश्नको उत्तर भने थिएन। बुवाले यो साफी गर्न बाँकी छ भनेर मलाई टार्नुभयो र हतारमै हाम्रो नाम पनि लेख्दिनुभयो।
‘त्यो हाम्रो वंशावली होइन, तपाईँहरुको मात्रै रहेछ। मलाई अबदेखि यो वंशावलीसँग केही मतलब छैन, यो मैले दोहोर्‍याएर कहिलै हेर्ने छैन, छुने छैन,’ चित्त फाटेको स्वरमा मैले भनेँ।
बुबा उत्तर विहिन हुनुभएको थियो। वंशावली छापिएर किताबमा आएछ। त्यसमा भने बुवाले हाम्रो नाम थपिदिनुभएको छ। ‘छापिएर आएको हैन बुवाले माथिबाट थप्नुभएको हो’ वंशावलीको कुरा चल्दा बहिनीले यो कुरा सम्झाइरहन्छे।
मैले चुपचाप बाबाको थर लेख्न छोडे। ‘आफ्नै' थर लेख्न थाले- शर्मा।
आमाको थर पनि त शर्मा नै छ। मैले आफूलाई सम्झाउन थाले।
बेलाबेला मानिसहरु सोध्थे, 'तिम्रो थर के हो?'
म शर्मा हो भन्थे। उनीहरुलाई चित्तै बुझ्दैनथ्यो, र सोध्थे, 'बुवाले के लेख्नुहुन्छ?'
‘मेरो थर आमाको थरबाट राखेको हो,’ म मानिसहरुलाई भनिदिन्थे।
यसरी पारिवारिक थर राख्न नपाएको पीरमा मैले धेरै वर्ष गुजारेँ। यी वर्षहरुमा चित्त दुखेर मेरो मनमा कति प्रश्न आए गए त्यसको हिसाब मैले राखिनँ।
फेरि नागरिकता बनाउने बेलामा थाहा भयो-बुवा बिना नागारिकता नबन्ने रहेछ। अचेल बल्ल बुझ्दैछु, यतिका वर्ष बुवाको थर राख्न पाइन भनेर मैले चित्त दुखाएँ, तर मलाई नौ महिनासम्म पेटमा बोक्ने आमाको त मेरो परिचयमा नामो निसान रहेनछ।
वुवाको थर हुने आमाको थरै नहुने? आमाले सन्तान जन्माउने अनि वंश चैँ बुवाको चल्ने? कसले बनायो यस्तो ?
हुन त म जात कुल जस्ता कुरामा त्यति धेरै दम हुन्छ भन्ने मान्दिनँ। थर, जात वा धर्मकै आधारमा मानिसबारे धारणा बनाउँदिन।
अचेल मलाई लाग्न थालेको छ- वंश भनेको पितृसत्ताको इगोमात्रै रहेछ। यही इगोले बसालेको व्यवस्थामा तमाम आमाहरुले आफ्नो पहिचानको बलि दिए।
आमाहरु विना पहिचान पनि खुसी भए। छोराहरुले कहिलै आफ्नी आमाको पहिचान खोजेनन्। आफ्नै स्वार्थसिद्ध हुने गरि समाजमा शासन गरे, परम्परा बसाले। छोरीहरुले त्यसैलाई मानिदिए।
यसरी पो हाम्रो समाज बनेको रै’छ।
यति बुझे पछि बुवाको थर लेख्न पाइन भनेर म किन चित्त दुखाउँ? आमाहरू पहिचान बलि चढाएर स्थापित बुवाहरुको अहममा म किन गर्व गरुँ?
शुक्रबार, पौष २२, २०७३ १२:३९:४६